Macalimiinta iyo Shaqaalaha | Sapsa
Taageerada Macallinka & Shaqaalaha
Xisaabaadka kharashka macallinka & maamulka, fadlan u soo gudbi rasiidhada dib -u -bixinta Qasnajiga SAPSA, Yesenia Anderson . Sawirrada ama baaritaannada lagu soo mariyo emaylka ayaa ah habka ugu fudud; fadlan kala xiriir e -mailkaaga haddii aad u baahan tahay kaalmo.
Ma qabtaa baahi aan hoos lagu soo hadal qaadin? Miisaaniyadaha miisaaniyadda lagu daray ka sokow, SAPSA waxay awood u leedahay inay hesho soo jeedinta maalgelinta sannadka ee bulshada dugsigeena. Guddigayagu si dhakhso ah ayuu ugu codeyn karaa kharashyada ka yar $ 500. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan maalgelinay qalabka ciyaarta, siminaarada horumarinta xirfadda iyo sahayda fasalka. Ijaarista P buuxi foomkan fudud ee weydiimaha ka yar $ 500 .
Haddii aad haysato soo jeedin kharash ka badan $ 500, soo jeedinta waa in lagu soo bandhigaa kulanka soo socda ee SAPSA oo loo codeeyo kulanka soo socda, qiyaastii 2 bilood oo ah waqtiga wareejinta. Waxaan dhowaan ansixiney lacag si aan u taageerno calaamad-siinta maktabadda oo wanaagsan, buugaag badan oo loogu talagalay maktabadda dugsiga ths, iyo xitaa madadaalo gudaha-dugsiga ah oo leh Ninja Anywhere, koorso carqalad ah oo ninja dagaalyahan ah. Ijaarka P buuxi foomkan codsiyada ka badan $ 500. Fadlan sidoo kale hubso inaad emayl u dirto Bryn Manion markaad soo gudbiso codsi maalgelin.
Macalimiinta & Maamulayaasha
Fasalka 21 & 17 kale
$ 250 qofkiiba
$ 9,500 Wadar
Maalgelin degdeg ah oo caqli -gal ah
$ 500 qofkiiba
$ 3,000 Wadar
$ 450 fasal kasta gaadiidka (basaska)
$ 500 oo sanduuq wadaag ah
Farshaxanka-ku-nool: $ 12,000
Farshaxanka-MIA: $ 1,500
Mala -awaalka Goobta: $ 1,000
Rugta Caafimaadka Geedka Qoyska: $ 250
Ilaalada: $ 500
Naadiga Orodka: $ 750
Shirka Qorayaasha Da'da yar: $ 500
Sida waxaad aragto? La xiriir si aad wax badan u baratid.